netzay.com.mm : Myanmar Online Shopping, Shopping Websites:SHOES
Pretty Fit Almond Metallic&Pearl Low Heel Women Shoe Code:WM40
- Upper Material :Leather
- Insole : Pu
- Heel Height : 2.5cm
Pretty Fit Black Metallic&Pearl Low Heel Women Shoe Code:WM40
Pretty Fit Black Women Shoe Code:WM-39
-ဘိုဆန်ပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့Leather Shoeလေးပါ။ အရောင်ဆန်းဆန်းလေးနဲ့ ပေါပေ့ါ့ပါးပါးစီးနိုင်မယ့်ဖိနပ်လေးပါနော်။ ဖိနပ်ပေါက်တတ်တဲ့ကောင်မလေးတို့အတွက်တော့ ဒီရှူးလေးက အရမ်းကိုအဆင်ပြေစေပါတယ်။
Pretty Fit Beige Women Shoe Code:WM-39
Pretty Fit Grey Women Shoe Code:SW803
-တမူထူးခြားတဲ့ဒေါင့်ဒီဇိုင်းလေးနဲ့ ရုံးသွားကျောင်းသွား ခြေထောက်လေးကို အလှဆင်ပေးမယ့် ရှူးအသစ်လေးပါနော် အရောင်ကလည်း လေဒီတို့အကြိုက် နုလွင်တဲ့အရောင်လေးတွေပါ။ ဒေါင့်ကအရမ်းမမြင့်လို့ ချော်ကျမှာလည်း မပူရပါဘူးနော်
Pretty Fit Pink Women Shoe Code:SW803
Pretty Fit White Women Sneaker
-Crystalလေးတွေနဲ့ ပြောင်ပြောင်လင်းလင်းလေးဖြစ်နေစေမယ့် sneaker
-မြင်လိုက်တဲ့ကောင်မလေးတိုင်းကြိုက်သွားကြလို့ ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဖြစ်နေတဲ့ ဒီဇိုင်းလေးပါနော်
-ပေါ့ပေါ့းပါးပါးနဲ့ ရှူးလေးပဲစီးချင်တယ်ဆိုရင်ခြေထောက်လည်းမနာပဲ လိုရာခရီးကိုအရောက်ပို့ပေးမယ့် ဒီsneakerလေးသာ ဝယ်ထားလိုက်တော့နော်။
Pretty Fit Black Women Sneaker
Pretty Fit Black Women Shoe Code:J-025
-Pretty Fitရဲ့ အသစ်ရောက်ရှိလာတဲ့ ရှူးအပြောင်ဒီဇိုင်းလေးပါရှင့်
-ပွဲတက်အတွက် အရောင်ဆန်းဆန်းလေးနဲ့ တင့်တယ်မှုရှိပြီး ခြေထောက်နာသက်သာစေမယ့် ဒီဇိုင်းလေးပါနော် ဝတ်ရချွတ်ရလွယ်ကူပြီး ဘာနဲ့ပဲဝတ်ဝတ်အဆင်ပြေစေတဲ့ ရှူးဒီဇိုင်းလေးပါနော်
Pretty Fit Grey Women Shoe Code:J-025
Skechers BKW Colour Air-Cooled Memory Foam (Women) Code:12756
-refer to USA size-chart -Mesh
-Lightly textured 3D printed fabric upper
-GOga Mat technology
-Heel pull on loop
Skechers BBK Colour Air-Cooled Memory Foam (Women) Code:12832
Skecher MVE Colour Goga Max (Women) Code:14965
refer to USA size-chart
Colorful jersy upper for cooling comfort.
Soft textile shoe lining for barefoot wear with padded heel cup.
Resalyte Midsole offers lightweight memory foam padding to help absorb impact.
Features Goga Plus+ Technology with high-rebound cushioning with responsive feedback.
GO Pillars shock absorbing technology and multidirectional rubber traction on outsole.
Skechers DEN Colour Go Step (Women) Code:14424
Skechers BKW Colour Air-Cooled Memory Foam (Women) Code:12773
Skechers BBK Colour Air-Cooled Memory Foam (Women) Code:12837
T-Belle One Block Heels Lady Shoe Code:16228
Made in China (A+Quality) ဖိနပ်ဒီဇိုင်းသစ်ဖြစ်ပါသည်။
-Qualityပိုင်းကိုပိုဦးစားပေးထားပြီး ခြေထောက်မနာအောင် Man-made Leather (PU) နဲ့ပြုလုပ်ထားပါသည်။
T-Belle One Block Heels Lady Shoe Code-53690-6
-China made quality A
Min: 4($) Max: 108($)
All 1 block heels Flats High Heels Pencil Heels Sandals Shoe Casual
All Almond beige Black Blue Brown Cream Gold Green Grey Grey khaki Light blue Light brown Orange Pink Purple Red Silver White Yellow
All 70% 30% 50% Big Sale
All GR8-SHOP MH Shoes & Sandals Mizz Footwears Collections Skechers Thee Belle Pretty Fit Dr.Kong
All Above4years
All Black White Blue Orange Pink Beige KHAKI GRAY ALMOND NUDE Champang Brown Almong Silver Ivory Champagne Gold Red Sand BLK BEI BLU ORG PIK CHR YEW PUP Lt.Beige Lt.Blue Grey Mint Green Teal Violet BBK LBNV HPBK CRL BLCL NVPK BKHP NVY GYPR WBPR skin Darkblue Gun
All 35 36 37 38 39 40 41 3466.577.5 8 8.559 5.5 9.5 10
All Pretty Fit Skechers Dr.Kong Mizz MH Thee Belle